कमल थापाको कसम, नातिको भ्यालेन्टाइन र हजुरबाको भालेटाइम ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
कमल थापाको कसम, नातिको भ्यालेन्टाइन र हजुरबाको भालेटाइम !
फागुन १, २०७८ आइतबार ८:४२:५४ | मिलन तिमिल्सिना
‘थाहा छ हजुरबा आज भ्यालेन्टाइन डे हो नि’ मोबाइल खेलाउँदै गरेको नाति केटो हजुरबाको छेउमा पुग्यो !
‘कस्तो हुन्छ नि यो भालेटाइम डे मा ?’ हजुरबाले भ्यालेन्टाइनलाई भालेटाइम भनेको सुनेर नाति मुर्छा परेर हाँस्यो ।
‘किन हाँसेको बजिया ? मैले जानेरै भालेटाइम भनेको हो । तिमीहरुको पालामा भ्यालेन्टाइन होला, हाम्रो पालामा त सधैँ भालेटाइम’ हजुरबा बुढा नातिलाई जितौँला झैँ गरी रौसिन खोजे ।
‘सुड्डो हजुरबा पनि खै के-के मात्रै भन्नुहुन्छ ? अनि रोज डे भन्ने थाहा छ त हजुरबा’ नातिले फेरि जिद्दी गर्यो ।
‘रोजी रोजी छान्ने भनेको त होला नि । केटाले केटी रोज्ने, केटीले केटा रोज्ने’ भ्यालेन्टाइन सिजनमा रमाउन थालेको नातिसँग हजुरबाले पनि आनन्द लिन खोजे।
हजुरबा रौसिन थालेपछि नातिले भन्यो, ‘भ्यालेन्टाइन डे सम्म पुग्न अरु खुड्किला पनि पार गर्नुपर्छ क्या हजुरबा । पहिले रोज डे, त्यसपछि प्रपोज डे, अनि चकलेट डे, टेडी डे, प्रमिस डे, हग डे, किस डे, अनि भ्यालेन्टाइन डे ।’
‘के-के भन्छ यो, हग डे रे ? त्यो त बिहान बिहान सधैँ हुन्छ नि । भालेटाइममा यो हग डे चाहिँ किन जोड्नुपर्यो ?’ हजुरबाले हग 'डे' लाई आफ्नै भाषामा अर्थ लगाएपछि नाति मुर्छा परेर हाँस्यो।
‘ल धेरै नहाँस केटा, त्यस्ता डे हाम्रो पालामा पनि हुन्थ्यो’ हजुरबाले फेरि सबै बुझेझैँ गरी बेलिविस्तार लगाउन थाले, ‘टीकाटालो गर्न जाँदा प्रपोज डे भैहाल्यो । जग्गेमा बस्दा पुरोहितले फूलअक्षता समात्न लगाउँथे, त्यो रोज डे भैहाल्यो । आधी कसार टोकेर दिन लगाउँथे, त्यो चकलेट डे । अग्नी साक्षी राखेर वाचा कसम खानुपर्थ्याे, त्यो प्रमिस डे भैहाल्यो । अनि स्वयंवरमा एकअर्कालाई अँगालो मारिन्थ्यो, त्यो हग डे भैहाल्यो’ हजुरबाले नातिलाई उछिन्ने गरि बेलिविस्तार लगाए ।
‘हैट हजुरबा बिहेमा हुने त्यस्ता काम पनि प्रमिस, रोज र हग डे हुन्छ त ? हाम्रो पालामा जस्तो हुनुपर्छ रोज, चकलेटदेखि किस डेसम्म पालैपालो’ नातिले आफ्नै कुरा माथि पार्न खोज्यो ।
‘हैट हजुरबा पनि क्या साह्रो हो’ नातिले लाज मानेझैँ र्गयो ।
‘किन लजाएझैँ गरेको नि बजिया ? तिमीहरु आजकलका ठिटाठिटीका सबै कुरा थाहा छ हामीलाई । तन बुढो भए पनि हाम्रो पनि मन तन्नेरी नै छ नि । तर हेर तिमीहरुका भन्दा हाम्रै पालाको लभ सजिलो थियो । न भ्यालेन्टाइनसम्म कुर्नुपर्थ्याे, न त्यसअघिका नानाथरी डे । मन मिल्यो, माया बस्यो’ हजुरबाले सबै खुलाए ।
हराएका गाईबाख्रा खोज्न सहयोग गर्नुपर्दथ्यो । तल्लो घरकी कान्छी वनमा घाँस काट्न जाँदा रुख चढ्न सक्दिन थिइ । माथ्लाघरे कान्छोले घाँस झारिदिन्थ्यो । घाँसदाउरा, गाईगोठालो र वनपाखा जाँदाजाँदै कान्छा र कान्छीको माया पिरिम झाङ्गिन्थ्यो ।
स्कुलमा राम र सीता एउटै कक्षामा पढ्थे । रामलाई सीता मन पर्ने, सीता वास्ता नगर्ने । एकदिन अर्धवार्षिक परीक्षामा जाँच दिँदादिँदै सीताको डटपेनमा मसी सकियो । रामले काम दिन्छ भनेर एउटा छुट्टै डटपेन बोकिरहन्थ्यो । त्यो दिन सीतालाई आपत पर्यो भन्ने उसले थाहा पायो । हत्तपत्त डटपेन दियो । अरुलाई चाहिएको भए किन दिन्थ्यो र ? आपतमा सहयोग गरेको मान्छे, त्यसपछि सीताले रामलाई मन पराउन थाली, दुवैको लभ पर्यो ।
लभ पर्न केही न केही त जुर्नुपर्यो । कि मन मिल्नुपर्याे । दुवैले दुवैलाई मन पराउनुपर्यो । तर दुवैलाई मन पराउने दोहोरो भन्दा एकोहोरो लभ धेरै हुन्छ । आफूलाई उ मन परेको हुन्छ । तर उसले बालमतलब दिने होइन । उसलाई पट्याउन, उनलाई फकाउन मरिहत्ते गरेर लाग्यो । कहिले बाटोमा कुरेर बस्यो । कहिले पँधेरामा सँगै गयो । कहिले किताब माग्यो, कहिले नोट माग्यो । कहिले कलम दियो, कहिले कलम माग्यो । कहिले खाजा दियो, तै पनि बालमतलब दिने होइन । तर कसरी कसरी कोहीसँग लभ चाहिँ परिहाल्छ ।
उबेला हाम्रो जमाना अर्कै थियो । कक्षाभित्र केटाकेटी एउटै बेन्चमा बस्न पाइँदैनथियो । केटाका लागि छुट्टै बेञ्च । केटीका लागि छुट्टै बेञ्च । कहिलेकाहीँ छुस्स छोइहाल्यो भने पनि झस्कनुपर्ने। हात मिलाउन त के छुन समेत पाइँदैनथियो । गोठालो जाँदा मन परेको छिमेकीसँग यसो कुरा गरेको वल्लोघरे पल्लोघरेले देखे भने पनि पँधेरोमा कुरा काट्ने मसला बनाउँथे ।
अहिले त ठिटाठिटी मोबाइलमै लभ गर्छन् । मोबाइलबाट फोन र एसएमएस गर्छन्, च्याट गर्छन् । कसैले त अनुहार नै नदेखि एसएमएस र फोन गरेर लभ गर्छन् । मोबाइलबाट गफ गर्दासम्म निकै राम्रो । उजस्तो सन्सारमा अरु कोही छैन जस्तो लाग्ने । जब भेट्न गयो, त्यसपछि छाँगाबाट खसेजस्तो । के सोचेँ पहिले के भयो अहिले । के देखेँ पहिले, के देखियो अहिले । देख्दै नदेखी मोबाइल लभ गरेपछि परिंदैन त फन्दामा ।
अहिले त आइ एल यू । मिस यू । डार्लिङ......भनेर छोटोछोटो लेख्छन् । केटीहरुका लुगा छोटिएझैँ लभ गर्ने वाक्य र शब्द छोटिन थाल्यो ।
लभलेटर पाउनेलाई पनि उत्तिकै मज्जा । आहा क्या सुन्दर अक्षर । क्या मीठो भाषा र शैली । यस्तो अक्षर लेख्ने हात कस्तो होला ? यस्तो भाषा र शैली लेख्ने भावना कस्तो होला ? अन्त कतै नगइ त्यही अक्षर हेरिरहुँ जस्तो, पढुरहुँजस्तो । सिरानमुनी, कुन्तुरमुनी, खाटमुनी लुकाइलुकाइ बेलाबेला पल्टाएर हेरिरहुँ जस्तो लाग्ने लभलेटर । १० वर्ष, २० वर्ष, ४० वर्षअघिसम्ममा लभलेटर सुरक्षित गरेर राखेका हुन्छन् बुढाबुढीले समेत । त्यति धेरै महत्त्वको छ लभलेटर ।
यति धेरै महत्त्व बोक्ने लभलेटरलाई मोबाइलले खाइदियो । हिजोआज लभलेटर लेख्ने चलन नै हरायो । मोबाइलमा दुई अक्षरको हाइ, तीन शब्दको आइ लभ यू र सेम टु यू, बाबा, माया भन्ने बाहेक लेख्ने काम कता पुग्यो कता । मोबाइलबाट फेद न टुप्पोको संवाद भन्दा लभलेटरमा भाँती पुर्याइ पुर्याइ लेखिने अक्षर, शब्द र सायरी नै लोभलाग्दा हुन्थे । असली भ्यालेन्टाइन त त्यो पो थियो नाति, अहिलेको त कमल थापाले गीताको कसम खाएजस्तो दुई दिनमै गर्ल्यामगुर्लुम !